अर्थ/बजार – SawalNepal
हेर्नुस आज सुनको मूल्य बढ्यो कि घट्यो?
हिजो सोमबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला ५०० रुपैयाले घटेको थियो। हिजो नेपाली बजारमा सुन प्रति तोला रु.५०,५०० मा कारोबार भएकोमा आज मंगलबार पनि ५०,५०० रुपैया प्रति तोलामानै कारोबार भईरहेको छ। यस्तै तेजावी सुनको मूल्य आज ५९,२०० रुपैँया रहेको छ। नेपाली बजारमा चाँदीको मुल्य हिजोको जस्तै ७०५ रुपैयामा नै कारबार भईरहेको छ।
विदेशी मुद्राको विनिमयदर, आज कुन देशको कति छ ? हेर्नुहोस् …
काठमाडौँ । आज मंगलबार अमेरिकी डलर सहित प्राय देशको मूल्य ओरालो रहेको छ। आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय ११ रुपैयाँ २८ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर १ सय ११ रुपैयाँ ८८ रहेको छ। त्यस्तै युके पाउण्ड १ को खरिददर १ सय ४१ रुपैयाँ ८२ पैसा, बिक्रिदर १ सय ४२ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको
आज पनि घट्यो सुन-चाँदीको मूल्य, तोलाको कति ? हेर्नुहोस् …
काठमाडौं । आज सोमबार सुनको भाउ ह्वात्तै घटेको छ। हिजो आईतबार ६० हजार रुपैयाँमा किनबेच भएको सुन आज ५९ हजार ५ सय रुपैयाँमा झरेको हो । अघिल्लो साता सुनको भाउ ६१ हजारसम्म पुगेको थियो। आज तेजावी सुनको मूल्य पनि ओरालो लागेको छ। आज तेजावी सुन प्रतितोला ५९ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी
आज बहराईन र कुवेती दिनार बाहेक सबै देशको मुल्य घट्यो, कुन देशको कति छ ?
काठमाडौँ । आज सोमबार अमेरिकी डलर सहित प्राय देशको मूल्य यथावत रहेको छ। आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय १२ रुपैयाँ ६ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर १ सय १२ रुपैयाँ ६६ रहेको छ। त्यस्तै युके पाउण्ड १ को खरिददर १ सय ४२ रुपैयाँ ५४ पैसा, बिक्रिदर १ सय ४३ रुपैयाँ ३० पैसा रहेको
काठमाडौं–नेपाली बजारमा आइतबार सुनचाँदीको भाउ घटेको छ । साताको कारोबारको अन्तिम दिन तोलामा ६० हजार २०० मा कारोबार भएको छापावाल सुनको भाउ आइतबार तोलामा रु २०० घटेर ६० हजारमा कारोबार भइरहेको हो। यस्तै तेजावी सुन तोलामा ५९ हजार ७०० मा कारोबार भइरहेको छ । चाँदी भने तोलामा रु ७१० मा कारोबार भएको छ । शुक्रबार
यस्तो छ राष्ट्र बैंकले तोकेको रियाल, रिंगिट, दिर्हाम लगायतका विदेशी मुद्राको भाउ
आज आइतबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अमेरिकी डलरको खरिददर ११२ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर ११२ रुपैयाँ ६६ पैसा तोकेको छ । यस्तै साउदी रियाल १ को खरिददर २९ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ०४ पैसा छ । आज कतारी रियाल १ को खरिददर ३० रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ
शुक्रबारको तुलनामा घट्यो विदेशी मुद्राको विनिमय, कुन देशको कति ?
काठमाडौँ । आज आईतबार अमेरिकी डलर सहित केही देशको मूल्य बढेको छ। भने प्राय देशमो विनिमयदर यथावत छ। आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय १२ रुपैयाँ ६ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर १ सय १२ रुपैयाँ ६६ रहेको छ। त्यस्तै युके पाउण्ड १ को खरिददर १ सय ४२ रुपैयाँ ९२ पैसा, बिक्रिदर १ सय
साढे ८ प्रतिशत ब्याजदरमा वाणिज्य बैंकले घर र गाडी किन्न ऋण दिने, किस्ता कति तिर्नुपर्छ ?
काठमाडौं । काठमाडौंमा घर र गाडी मध्यमवर्गको लागि एउटा सपना नै हो । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण दिने रकमको अभाव छ । जसको कारण ब्याजदर बढी छ भने सहज रुपमा ऋण नपाइने अवस्था छ । संचालनमा रहेका वाणिज्य बैंकमा सबैभन्दा सस्तो ब्याजदर पूर्ण सरकारी लगानीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको छ । वाणिज्य बैंकले
आज अमेरिकी डलरसहित केही देशको भाउ बढ्यो, कुन देशको कति ?
काठमाडौँ । आज शनिबार अमेरिकी डलर सहित केही देशको मूल्य बढेको छ। भने प्राय देशमो विनिमयदर यथावत छ। आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय १२ रुपैयाँ ६ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर १ सय १२ रुपैयाँ ६६ रहेको छ। त्यस्तै युके पाउण्ड १ को खरिददर १ सय ४२ रुपैयाँ ९२ पैसा, बिक्रिदर १ सय
घट्यो पेट्रोल र डिजलको मूल्य, हेर्नुहोस कति पुग्यो ?
काठमाडौं– नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीटेलको मूल्य घटाएको छ । निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ मूल्य घटाएको हो । घटेको मूल्य शुक्रबार मध्यराती १२ बजेदेखि लागू हुनेछ । योसँगै अब काठमाडौंमा एक लिटर पेट्रोल खरिद गर्न प्रतिलिटर १०९ रुपैयाँ ५० पैसा तथा डिजेल र मट्टितेल खरिद